Fehin-kevitry ny atrikasa nasionaly - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Izahay komitin’ny FAHAMARINANA-FANDRIAMPAHALEMANA-FIADANANA na K3F, solontena avy amin’ny fiangonana, faritra, fikambanana, fiarahamonim-pirenena, vondrona sy antoko politika, sendika, sns… nivory teto amin’ny kolejy Saint François Xavier Fianarantsoa ny 17 sy 18 Aprily 2018 dia :
Miombon-kevitra ary namaly ireo fanambarana sy Antso nataon’ny Fivondronamben’ny Eveka eto Madagasikara sy ny FFKM tamin’ny taona 2017 mahakasika ny fiainam-pirenena izay mikorosy fahana amin’ny lafiny maro : fandrobana ny harem-pirenena, tsy fandriampahalemana, kolikoly, fitantanana gaboraraka, faharavan’ny sosialim-bahoaka, fidangan’ny vidim-piainana, sns.
Niara-nahatsapa ny mpivory fa tsy vitan’ny tompon’andraikitra ara-panjakàna ny mametraka ny FAHAMARINANA sy ny FANDRIAMPAHALEMANA ary ny FIADANANA eto amin’ny Firenena. Nasongadina ihany koa fa ny fanarenam-pirenena tena izy dia mitaky firosoana amin’ireto manaraka ireto :
1. MOMBA NY FAHAMARINANA :
Very hasina sy tsy mahatanteraka ny andraikiny ireo rafitra natao hampihatra ny fahamarinana, noho izany, takiana ny fahafantarana ny MARINA eto amin’ny Firenena ary apetraka ny rafitra sy rindran-damina hahatonga ny FAHAMARINANA ho soatoavina iainan’ny rehetra.
Singanina amin’izany ireto sehatra ireto :
- Fitsaràna madio tsy baikon’ny vola sy ny tsindry samihafa ;
- Fananan-tany miaro ny zon’ny tompontany sy mpandova teratany ;
- Sampandraharaham-panjakàna lavitra ny kolikoly ary manompo marina ny vahoaka ;
- Fiarovana ny fitrandrahana ny harem-pirenena hifanaraka amin’ny tombontsoan’ny faitra sy ny firenena ;
- Fanavaozana ireo lalàna manandevo sy tsy mifanaraka amin’ny fiarahamonina Malagasy ;
- Atao fanamby ny hamerina indray eto amin’ny tany sy ny firenena ny kolontsain’ny « tain’omby mivadika manam-tompo
2. MAHAKASIKA NY FANDRIAMPAHALEMANA :
Ampy izay ny rà latsaka sy aina nafoy ary faharavam-pananana maha fadiranovana ny Malagasy.
Andraikitry ny fanjakana feno sy tanteraka ny miaro ny olona sy ny fananany ary ny fihariany. Mba hampijoroana fandriampahalemana sy filaminana maharitra dia :
- Hatsaraina amin’ny alalan’ny lalàna ny rafitra sy ny fandraisana andraikitra miainga avy any ifotony, ka ankatoavina ara-panjakana ny dinam-pokonolona.
- Ampiana sy tsinjaraina ara-drariny ireo enti-manana (ara-bola, arak’olona, ara-pitaovana) hiantohana ny fandriampahalemana.
- Tsy ekena ny tsimatimanota noho ny kiantrano an-trano ary ampiharina ny fitovian’ny rehetra eo anatrehan’ny lalàna.
- Atsangana ny rafitra mahaleo tena ivondronan’ny olon-kendry sy olo-marina (Raiamandreny ara-pinoana sy ara-piaraha-monina) mba hanara-maso ny fahefam-panjakàna sy hiaro ny vahoaka manoloana ny tsy fahamarinana sy tsindry hazo lena.
3. MOMBA NY FIADANANA :
Hetaheta ny fanirian’ny olompirenena rehetra ny hiadana sy ho finaritra eto anivon’ny Nosindrazantsika.
Tsy ho tanteraka anefa izany raha tsy zary fototra ny iorenan’ny tranobe iombonana ny FAHAMARINANA, hampanjaka ny FANDRIAMPAHALEMANA, hiainan’ny isambatan’olona ny FIADANANA. Noho izany :
- Apetraka ny rafi-pampandrosoana isan’ambaratonga hitsinjaràna ara-drariny ny harem-pirenena ;
- Arindra arak’izany ny rafi-panabeazana ilain’ny olona sy ny firenena ;
- Tsinjovina manokana ny fampivoarana ny eny ambanivohitra (jiro, lalana, asa, fahasalamana, sns…)
Noho ireo rehetra ireo dia niombon-kevitra ny maro fa :
- tsy azo ekena intsony ny hitohizan’izao fahantrana sy fahalozana eto amin’ny firenena izao ;
- tsy maintsy mandray andraikitra ny malagasy tsy an-kanavaka, hifanome tanana hanarina ny faharavana ;
- raha mbola heverin’ny mpitondra fanjakana ankehitriny fa voafehiny ny fitantanana ny firenena, dia aoka izy haneho fa vitany ao anatin’ny fotoana fohy ny mampitsahatra izao fahoriambahoaka izao.
Efa miaina ao anaty krizy lalina ny firenena ankehitriny koa tsy azo ihodivirana ny FIFAMPIDINIHANA eo amin’ny samy Malagasy hametrahana ny fototra iarahan’ny rehetra mientana sy manaiky, toy ny lalam-panorenana sy ny lalam-pifidianana.
Mba tsy hahavery momoka ny ezaka efa natomboka dia adidy miandry ny rehetra ny :
- Fanaovan’ny mpizaika tatitra amin’ny vahoaka hahazoany mandray andraikitra ;
- Fananganana ny rafitra K3F isam-paritra sy isan-tsehatra hanatanteraka ny fehin-kevitry ny atrik’asa ;
- Fitandrovana ny K3F ho sehatra ivondronana sy ifanakalozan-kevitra araky ny soatoavina maha-Malagasy.
Izao atrik’asa izao no tanteraka dia teo ny firaisan-kina, koa hamafiso hatrany ny fiombonana sy ny fandrindràna mba hanatanterahana ireo dingana mbola miandry antsika hametrahana ny « FANARENAM-PIRENENA TENA IZY ».
Eto am-pamaranana dia mankasitraka manokana ireo rehetra nanolo-tanana, indrindra ireo Raiamandreny ara-panahy sy ara-piaraha-monina ka nahalavorary izao atrik’asa izao. Iangaviana izy ireo hanohy ny tantsoroka ny VAHOAKAN’ANDRIAMANITRA, ho sahy hijoro amin’ny FAHAMARINANA sy hampanjaka ny FANDRIAMPAHALEMANA ary hikatsaka ny FIADANANA.
Isaorana ihany koa ny herivelona rehetra nandany mandro kely ka nandray anjara tamin’izao atrik’asa izao noho ny fitiavana ny tanindrazana iombonana.
« Aza manaiky resin’ny ratsy, fa reseo amin’ny soa ny ratsy » Rom. 12,21